Farmshop : Namokatra provandy hoan’ny trondro
On mai 3, 2018 1 976
Ho fampiroboroboana ny toe-karena Malagasy dia anisany nandray anjara amin’ny foara natokana ho an’ny tontolon’ny fiompiana eto Madagasikara izay karakarain’ny FEPA ny Farmshop. Rantsana iray ao anatin’ny vondrona Eclosia miaraka amin’ny LFL sy Avitech ny Farmshop ary efa nahatratra 20 taona teo amin’ny sehatra famokarana ny sakafom-biby.
Raha ny LFL manokana dia saika ny sakafo manaraka ny fenitra amin’ny fiompiana ny biby fiompy no vokariny, ka ahitana izany ny any Toamasina, Antsiranana ary ny eto Antananarivo. Tanjona ny hanaparitahana ny orinasa manerana ny Nosy.
SAKAFO HO AN’NY FIOMPIANA TILAPIA
Nampahafantarina nanomboka androany teny amin’ny foara natokana ho an’ny tontolon’ny fiompiana eto Madagasikara, ny provandy vaovao novokarin’ny Farmshop natokana hoan’ny fiompiana trondro Tilapia. Sakafo feno, tsy mora levona ary afaka mitsingevana eny ambony rano mandritra ny ora iray. Mahatratra hatrany amin’ny 300g ny lanjan’ny trondro iray ao anatin’ny enim-bolana ary ambany taham-pahafatesany.
Tombony manokana hoan’ity provandy ity ny ahafahana mitahiry sy mampiasa azy mandritra enim-bolana, tsy atahorana ny ho simba na dia efa misokatra aza ny kitapo.
Fikarohana lalina no nahafahan’ny Farmshop namokatra izao sakafon-trondro izao ka na eny ambony na anaty rano ary ity provandy ity dia tsy miova mihitsy ny tahan’ny kasinga hita ao aminy toy ny proteina izay mitondra hery sy tanjaka.
Sary : Jayah
Sary nanamarika ny fotoana
Paositra Malagasy : Efa miditra amin’ny fandraharahana ny vola
Afrika Atsimo : Eny amin’ny banky no handoavana ny visa manomboka ny volana jona